चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको कार्यक्रममा प्रचण्ड र बाबुरामको सम्बोधन –कसले के भने ! | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको कार्यक्रममा प्रचण्ड र बाबुरामको सम्बोधन –कसले के भने !
कात्तिक ४ गते, २०७७ - १८:४७
आफू पधानमन्त्री हुँदादेखि नै त्रिदेशीय रणनीतिक समझदारीका पक्षमा रहेको बताउँदै प्रचण्डले बिआरआईबाट नेपाल र चीन दुबैले लाभ लिन सक्ने बताए । “यो नेपाल र नेपालजस्ता देशका लागि महत्वपूर्ण अवसर हो ।”
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डले चीनले अघि सारेको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) नेपालको विकासका लागि महत्वपूर्ण हुने बताएका छन् ।
चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी अन्तर्राष्ट्रिय विभागले आयोजना गरेको अनलाईन छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले नेपाली राजनीतिक कोर्स शान्ति, स्थायित्व र विकासतर्फ अघि बढेको बताउँदै त्यसका बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) परियोजना महत्वपूर्ण हुने बताएका हुन् ।
आफू पधानमन्त्री हुँदादेखि नै त्रिदेशीय रणनीतिक समझदारीका पक्षमा रहेको बताउँदै प्रचण्डले बिआरआईबाट नेपाल र चीन दुबैले लाभ लिन सक्ने बताए । “यो नेपाल र नेपालजस्ता देशका लागि महत्वपूर्ण अवसर हो ।” उनले भने ।
नेपाल र चीनबीच सांस्कृतिक तथा राजनीतिकरुपमा ऐतिहासिक सम्बन्ध रहेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै प्रचण्डले बिआरआईले आर्थिक सम्बन्धमा नयाँ उचाई थप्ने समेत बताए । गत वर्ष चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिन फिङको नेपाल भ्रमणमा भएका सम्झौताको प्रसंग उल्लेख गर्दै प्रचण्डले नेपालले सन्तुलित विदेश नीति अवलम्बन गरेको र समन्यायिक विकासको बाटो समातेको बताए । चीनको बिआरआईले एक पक्षले अर्को पक्षलाई आर्थिक या राजनीतिकरुपमा प्रभुत्व लादने अवस्था सिर्जना नहुने उनको आशय थियो ।
उक्त कार्यक्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री तथा जसपा नेता बाबुराम भट्टराई समेत सम्बोधन गरेका थिए ।
डा. बाबुराम भट्टराईले बिआरआईले यस क्षेत्रको नवीनता, उत्पादकत्व र प्रगतिका लागि महत्वपूर्ण हुने बताए ।
त्यस्तै बिआरआईले नेपाललाई विश्वव्यापी मूल्य शृंखलामा पहुँच पुऱ्याउन सघाउ पुग्नेसमेत पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले बताए ।
बिआरआईका नौवटा आयोजनाअन्तर्गत ट्रान्स–हिमालयन कनेक्टिभिटीले नेपाली नागरिकलाई सबैभन्दा बढी आकर्षित गरेकोसमेत उनले बताए ।
राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले नेपालले बेल्ट एन्ड रोड परियोजनाअन्तर्गत छनोट गरेका नौवटा आयोजनालाई छिट्टै अन्तिम रूप दिएर कार्यान्वयनमा जानुपर्ने बताए ।
कात्तिक ४ गते, २०७७ - १८:४७ मा प्रकाशित